रियल मड्रिड सर्वाधिक धेरै ‘फलोअर्स’ भएको क्लब, बार्सिलोना र युभेन्टसको स्थान कहाँ ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलरियल मड्रिड सर्वाधिक धेरै ‘फलोअर्स’ भएको क्लब, बार्सिलोना र युभेन्टसको स्थान कहाँ ?
एजेन्सी, १४ पुस । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै फलोवर्स भएको फुटबल क्लब बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा गरी रियलको २ सय २३ मिलियन फलोअर्स रहेको छ ।
यसैगरी ला लिगा च्याम्पियन क्लब बार्सिलोना भने दोस्रो नम्बरमा छ । बार्सिलोनाको सामाजिक सञ्जालमा २ सय १३ मिलियनले फलोवर्स छन् । धेरै फलोवर्स हुने क्लबको सूचीमा तेस्रो स्थान बनाएको छ, इंग्लिस प्रिमियर लिगको म्यानचेस्टर युनाइटेडले । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा १ सय २५ मिलियनले फलो गरेका छन् ।
चौथो स्थानमा इंग्लिस क्लब चेल्सी छ । उसँग ८१ मिलियन फलोअर्स छन् । यस्तै इटालियन च्याम्पियन क्लब युभेन्टसले पाँचौं स्थान बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोका कारण इटालियन सिरी ‘ए’ क्लब युभेन्टस पाँचौं स्थानमा छ । युभेन्टससँग ८० मिलियन फलोवर्स छन्
छैटौं स्थानमा ७३ मिलियन फलोवर्स रहेको जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख रहँदा सातौं स्थानमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) छ । ब्राजिलियन स्टार नेयमार रहेको क्लब पीएसजीसँग ७१ मिलियन फलोवर्स छन् । आठौं स्थानमा युरोपियन च्याम्पियन क्लब लिभरपुल हुँदा नवौं स्थानमा आर्सनल तथा दसौं स्थानमा म्यानचेस्टर सिटी छ ।